Luke Howard iyo kala sooca daruuraha | Saadaasha Shabakadda
Maqaal hore waxaan ku aragnay kuwa kala duwan noocyada daruuraha in aan ku kulmi karno cirkayaga. Saadaasha hawada waa cilmi la bartay qarniyo badan. Sababtaas awgeed, maanta waxaan u safraynaa waayihii hore si aan ula kulanno saynisyahankii ugu horreeyay ee magacaabay daruuraha. Ku saabsan yahay Luke Howard. Reer London ah dhalasho ahaan, farmashiiste xirfad ahaan iyo khabiir ku takhasusay saadaasha hawadda, wuxuu ahaa ninka ku mashquulsan daruuraha ilaa yaraantiisii.
Halkan waxaad ku baran kartaa taariikh nololeedkii oo dhan ee Luke Howard iyo sida uu ugu magac daray daruuraha una aqoonsado. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato taariikhda saadaasha hawada iyo daruuraha?
1 Luukos Howard sheeko
2 Noocyada aasaasiga ah ee daruuraha cirka
3 Noocyada daruuraha ee uu aqoonsaday Luke Howard
4 Daruuraha maanta
Luukos Howard sheeko
Ilmo ahaan, Luukos wuxuu saacado badan ku qaatay dugsiga maalintii isagoo fiirinaya daaqadda daruuraha. Dareenkiisa wuxuu ahaa cirka iyo cimilada. Wuxuu dhashay 1772 iyo, sida ugu dhow qof kasta oo waqtigaas, isagu ma uusan fahmin sida daruuraha loo sameeyay. Daruurahaas cirka ka duulayaa weligoodba waxay ahaayeen qarsoodi mudan in bini aadamku xaliyo. Waxyaabaha qalafsan ee kora oo cirro noqda illaa roobku da'o. Dad badan ayaa xiiseynayey daruuraha, laakiin ma jirin qof la mid ah Luke Howard.
Waana tan iyo yaraantiisii ​​inuu ku riyaaqay la socodka dhaqdhaqaaqyadooda wuxuuna go'aansaday in daruuraha ay yeeshaan magac iyadoo kuxiran qaabkooda. Isaga laftiisa ayaa aqbalay in uusan ahmiyad badan siin fasalka. Si kastaba ha noqotee, nasiib wanaag mustaqbalka saadaasha hawada, ninkani wuxuu bartay xoogaa Latin ah.
Marka loo barbardhigo sayniska kale, saadaasha hawadu waxay yeelatay xilli dambe. Tani waa sababta oo ah aqoonta iyo tikniyoolajiyadda looga baahan yahay qiimeynta iyo la socoshada cimilada iyo cimiladu way ka dhib badan yihiin. Mar dambe ayay ahayd markii saadaasha hawadu ay u soo baxday saynis ahaan mahadiisana waxaan u leenahay aqoon badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa meeraha.
Qofna ma qaadi karo xoogaa daruur ah oo ku falanqee shaybaarka ama soo qaado qaansoroobaad qaansoroobaad. Sidaa darteed, fahamka daruuraha ayaa u baahan qaab ka duwan kan Luke Howard uu awood u siiyay inuu siiyo cilmigan.
Noocyada aasaasiga ah ee daruuraha cirka
Aragtidiisa daruuraha ayaa sii faafaahin ka dib sannado badan oo uu si joogto ah u daawanayay cirka oo dhowr siyaabood diiradda lagu saaray. In kasta oo daruuruhu qaabab badan ku qaadan karaan heer shaqsiyeed, aakhirkii waxay u dhigmayeen qaab. Waxaa la dhihi karaa waxay ka tirsan yihiin saldhig tirooyin ay daruuraha ka siman yihiin.
Dhammaan daruuraha goobta ku sugnaa waxaa iska lahaa saddexda qoys ee waaweyn ee uu Luke Howard aqoonsaday.
Midka hore waa daruurta cirrus. Cirrus wuxuu Latin u ahaa fiber ama timo. Waxaa loola jeedaa daruuraha dhaadheer ee ay sameeyeen kristantarrada barafka ee ku samaysan jawiga. Qaabkeedu wuxuu u dhigmaa magaca loo bixiyey.
Dhanka kale, waan helnaa daruuraha cumulus. Laatiin ahaan waxaa loola jeedaa taallo ama tuulmo waxaana loola jeedaa qaabkeeda.
Ugu dambeyntii, waxaa jiray qoyska stratus. Waxay uga jeedday lakab ama xaashi.
Howard daruuraha si isdaba joog ah ayey isu beddelayeen. Qaab kaliya maahan laakiin sidoo kale waxay hoos iyo hoos u sii dhaadheceen, way is milmeen oo waxay ku faafeen jawiga. Daruuraha ayaa ku jira dhaqdhaqaaq joogto ah waana dhif iyo naadir in ay isku qaab iyo dherer yihiin daqiiqado badan markiiba.
Nooc kasta oo kala-saarista daruurtu waa inay tan tixgelisaa. Sidaa darteed, si loo dhexgalo saddexda qoys ee daruurta ah, noocyada dhexe iyo kuwa isku dhafan ayaa lagu daray. Tan waxaa loo sameeyay si loogu daro kumeelgaarka caadiga ah ee u dhexeeya hal qoys iyo mid kale iyo in si sax ah loogu saadaaliyo saadaasha hawada.
Noocyada daruuraha ee uu aqoonsaday Luke Howard
Howard waxay ku guuleysteen inay aqoonsadaan toddobada nooc ee daruuraha oo ay weheliyaan cumulonimbus. Waxaa sidoo kale loo yaqaan daruurta duufaanka xoogga leh. Tan waxaa ka imanaysa oraahda "inay noqonayso jannada toddobaad." Cirrus dhaadheer oo dhaadheer oo soo degaya oo faafinaya waxaa loo yaqaan 'cirrostratus'. Micnaheedu waa inay leedahay astaamo labada daruur waana kala guur mid iyo midka kale. Intaas waxaa sii dheer, sameynta daruurtan waxay na siin kartaa macluumaad ku saabsan xaaladaha saadaasha hawada ee dhacay ee la yiri daruuraha si ay u sameysmaan.
Dhinaca kale, waxaan sidoo kale helnaa koox daruuro cumulus ah oo mideeya isla markaana ku faafa. Wuxuu ugu yeeray noocan daruurta ah stratocumulus. Daruurtan waxay ku dhacdaa xaalado kala duwan oo jawiga waxayna ku siin kartaa macluumaad ku saabsan isbeddelada saadaasha hawada adigoo fiirinaya.
Qiimeynta Howard waxay yeelatay saameyn caalami ah isla markiiba. Markii daruuraha la magacaabay lana kala saaray, fahamka daruuraha ayaa fududaaday oo la caddeeyay. Sidoo kale, habab badan oo hawo-qaadasho ah ayaa laga garan karaa mahadsanid noocyada daruuraha.
Taasina waa tan loogu talagalay Luke Howard daruuraha ku tilmaam xusuus qor qumman jannada taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan fahanno qaababka uu wareegga jawigu ku socdo Maanta nooca daruuraha ayaa wali loo adeegsadaa saadaasha hawada.
Tan iyo markaas nephology ayaa kacay. Waa sayniska oo daraaseeya daruuraha welina hiwaayad weyn u ah kuwa ilaaliya cirka.
Maaddaama tiknoolajiyadda iyo sayniska ay horumareen, waxaan eegaynaa wax badan oo ku saabsan taleefannada casriga ah si aan u ogaano cimilada marka loo eego cirka. Hadda waxaan illownay in cirkeennu na siin karo macluumaad badan oo ku saabsan haddii aan qaadanno dalladda ama muraayadaha indhaha.
Si kastaba ha noqotee, awoowayaasheen ma ogeyn in qaabka daruuraha ay leeyihiin qiime kasta oo saadaalin ah. Si kastaba ha noqotee, waxay adeegsadeen magac u gaar ah oo ka duwan kan Latin. Xaqiiqdii waad maqashay erayga «Jannada jannada. Haddii uusan maanta da’in, berri wuu da'ayaa ». Odhaahdani waxay tilmaamaysaa cirka ay samaysteen daruuraha cirrocumulus. Daruurahan cirka ku jira waxay u egyihiin dharka adhiga waxayna muujinayaan in cimiladu isbadali doonto qiyaastii laba iyo toban saacadood. Sidaa darteed, waxaa la yiraahdaa haddii uusan roob da’in isla maalinta ay daruurahan soo muuqdaan, waxay qaadan doontaa maalin kale inuu roob da’o.
Waa in aynaan iloobin in jawiga jawiga hawada uu si isdaba joog ah isu beddelayo iyo in saadaasha hawadu ee daruuraha aan had iyo jeer lagu kalsoonaan karin
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Luke Howard iyo kala soocida daruuraha